शब्दको खेल | samakalinsahitya.com
- मोदनाथ अधिकारी
भाषा होस् त नेपाली भाषा जस्तो होस् । जुन भाषामा सामथ्र्य छ अर्थ छैन, जुन भाषामा शब्द छ सार्थकता छैन, त्यो भाषा के भाषा ? हाम्रो भाषाका प्रत्येक शब्दमा अनेक अर्थ छन् जसलाई हावा चल्दै गर्दा फिरफिराएको पिपलको पातसरी यता, उता जता पन िपल्टाउन सकिन्छ । ‘पल्टाउनु’ शब्दकै अर्थ अनेक छन् । अझ यस शब्दसँग अनेक शब्द जोडेर अथ्र्याउँदा सत्ता पल्टनउनु, भत्ता पल्टाउनु, भुँडी पल्टाउनु.....।
थुप्रै कुरा पल्टाउनुसँग जोडिन सक्छन् । त्यसैले शब्दको सामथ्र्यको कुरा छाडौँ । यी गह्रौ भन्दा बढी चिप्ला छन् । यी चिप्लँदा कहिलेकाँही जिब्रो नै चिप्ल्याउँछन् । अरुको त के कुरा उल्टोबाट जितेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल महामहिमको समेत जिब्रो चिप्ल्याउने शब्द नै हुन् ।
यही शब्दले कसैको जिब्रो चिप्ल्यायो, कसैको घाँटी चर्कायो, ......। के ग¥यो भन्दा पनि के गरेन र ! शब्दले चमत्कार ग¥यो व्यपक अर्थ बोकेर विश्व भ्रमणमा निस्कियो । अबिलम्ब सगरमाथा चुम्यो । वा ! क्या राम्रो शब्द ‘अबिलम्ब’ । अर्थ हो यसको तुरुन्तै, बिलम्ब नगरी । शब्दले अर्थ दियो स्पष्ट तर समय भयो अस्पष्ट । तुरुन्तै भनेको कति सेकेण्ड हो, कति मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, वर्ष, दशक, शताब्दी ...... । यति बेला अञ्जु पन्तले गाएको गीत ! “..... मैले के बिराएँ” ले मेरो दिमाग रङ्मङ्गिदै छ । तीन बुँदे सहमति गर्नेको एक हिस्साले ठुलो कसरतका बाबजुद शब्दकोश पल्टाएरै फेला पारेको ‘अबिलम्ब’ शब्दको भावसँगै पन्तको स्वरमा स्वर मिलाउँदै गीतको भाषा फेरे “... खोजेजस्तै शब्द पाएँ मैले के बिराएँ” । अर्को हिस्सा यो कुराले हिस्सियो, खिस्सियो, जिल्लियो र पन्तकै लयमा गुन्गुनायो, “...धम्की लाएँ धोका खाएँ मैले के बिराएँ” ... ।
शब्दको कुरा गर्दा ‘सहमति’ शब्दलाई नै हेरुँ न । सहमति भनेको सबैजनाको एउटै मत भनेको हो तर मतैक्य किन भएन ? यो खेल शब्दकै हो नकि राजनीतिक दलको । यी त मात्र खेलाडी न हुन् । ‘संविधान’ नमको चर अक्षरे शब्दलाई दुई वर्ष खेलाए । तैपनि खेलको टुङ्गो नलागेर जब भयो राति अनि बुढी ताती भने झैँ रातारात खेलको समय थपे । यससँगै थपे अर्को खेलको नयाँ हतियाररुपि शब्द ‘अबिलम्ब’ ।
सहमति शब्दको नालीबेली पढेपछि मात्र थाहा भो यसले मभ्रिष्ट भन्ने अर्थको प्रतिपादन गरेको रहेछ । त्यो पनि जेष्ठ चौध गते राति बाह्र बजे । संविधान नामक शब्द खेलाउन दुई वर्षले नपुगेर एक वर्ष थपिए झैँ नवनियुक्त शब्द ‘अबिलम्ब’ शब्दको गाँठो फुकाउन पनि दुई प्लस एक गरी तीन वर्ष चहिएला नै । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधान अबिलम्ब निर्माण गर्ने सहमतिका लागि छ वर्ष लाग्ने रहेछ । यी तीन शब्दका खेलका लागि छ वर्ष लाग्छ भने संविधानभित्र समेटिने असङ्ख्य शब्दका लागि लाग्ने समय पनि गनी साध्य छैन । त्यसैले गणतन्त्र शब्दमाथि पनि खेल भएझैँ लाग्छ । यो त गनतन्त्र पो रहेछ । थप्ने समय गन्न पाउने, भत्ता गन्न पाउने, सत्ता गन्न पाउने..... ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 28 जेठ, 2067
पहिले ग्यास्ट्रिक अहिले लव्यास्टिक
हिउँको तन्नामा बसेर बजगाईंलाई चियाउँदा